Unxantathu Wokuthuthukiswa Kwewebhu | Martech Zone
Zonke izinkontileka zethu namakhasimende ethu ziyizibopho eziqhubekayo zanyanga zonke. Kuyaqabukela siphishekela iphrojekthi engaguquki futhi cishe asikaze siqinisekise umugqa wesikhathi. Lokho kungazwakala kuthusa kwabanye kepha inkinga ukuthi inhloso akumele kube usuku lokukhishwa, kufanele kube yimiphumela yebhizinisi. Umsebenzi wethu ukuthola amakhasimende ethu imiphumela yebhizinisi, hhayi ukuthatha izinqamuleli ukwenza izinsuku zokwethulwa. Njengoba i-Healthcare.gov ifunda, leyo yindlela ezoholela kulokho okulindelwe.
Ukuzama nokugcina amaphrojekthi wamakhasimende ngesikhathi, sihlukanisa izidingo zibe kufanele (zihlangane nemiphumela yebhizinisi) futhi kube kuhle ukuba nazo (izithuthukisi ongazikhethela). Futhi asikaze sihlele ukuthi ziyaphela ngesikhathi sokukhishwa ngoba siyazi ukuthi kuzohlale kunezinguquko ezidingekayo.
URobert Patrick uyi-CEO ye Amalebhu we-PhD, iyinhlangano eklama, yakha futhi ivule amawebhusayithi ezinkampanini eziningi eziphezulu ze-Fortune 500. URobert ubelokhu ebeke phansi izingqinamba ngobunzima i-Healthcare.gov ehlangane nabo futhi unikeze izizathu ezi-5 ezibalulekile zokwethulwa okuhlulekile.
Ungalokothi, wake wephula i- Isikhathi, Izindleko & Isici Setha umthetho. Cabanga ngalokhu njengonxantathu, kufanele ukhethe iphuzu elilodwa fixed nokunye ukuguquguquka okubili. Kulo mhlaba, noma yini ingadalwa inqobo nje uma kunesikhathi nemali eyanele. Kodwa-ke, noma ngubani owakha uhlelo lwewebhu kufanele akhethe, phambili, okuyinto ebaluleke kakhulu. Lokhu kusetha ithoni futhi kugxilwe ekutheni iphrojekthi kufanele yethulwe kanjani. Ngokwesibonelo,
Uma kufanele yethulwe kanye kuphela lapho kwenziwa izici ezithile (imali nesikhathi ziyahlukahluka).
Uma kufanele yethulwe ngokushesha (imali nezici kuyahlukahluka).
Uma kufanele yethulwe ngesabelomali engqondweni (isikhathi nezici kuyahlukahluka).
Ukwethulwa nge- umugqa wokuqeda engqondweni esikhundleni somugqa wokuqala. Izinhlelo zokusebenza zewebhu kufanele zibonwe njengephrojekthi ezokwenza isiqalo bese ukuvela. Ukwakha okubalulekile futhi okuyimpoqo kwanamuhla ngokukhula nokuziphendukela kwemvelo engqondweni kuhlala kungcono kunokukwakha ngenhloso yokuqeda ekuqaleni.
Baningi kakhulu abathengisi abathintekayo. Kubikwe ukuthi iwebhusayithi ye-Obamacare ibinabathengisi abacishe babe ngama-55 abathintekayo. Ukungeza abathengisi abaningi kunoma iyiphi iphrojekthi kungaba ithambeka elishelelayo. Ungaqinisekisa ukuthi kuzoba nezinkinga ngokuhunyushelwa kwamafayela, ukungafani kwefayela lobuciko, ukungafani kwemibono yobuciko, ukushiywa kwephrojekthi, futhi uhlu luyaqhubeka nokuqhubeka. Cabanga ukube besinama-senate angama-55 ngamunye enikezwe umsebenzi wokuxazulula ingxenye yenkinga isiyonke.
Ulwazi Lwezakhiwo kungathathwa ngokungathi sína. Imvamisa, ama-ejensi amakhulu azocela abathengisi ukuthi bahambise ibhidi ku-RFP futhi beqe ngokuphelele inqubo ye-Information Architecture yeqa ngqo entuthuko ngaphandle kokuqonda noma ukuvumelana ngezinga elithile. Lokhu kukhulu, kubi, kudlala isikhathi, ukulahlekelwa yimali, iphutha. Kubaluleke kakhulu ekwakhiweni kohlelo lokusebenza ngangokunokwenzeka ngaphambili futhi uzilungiselele ukuba beshesha futhi babe nezimo ezintweni ezingenakubikezelwa kahle ngaphambi kokuthi uyiqalele (lokhu kufana nokwakha indlu ngaphandle kwamapulani). Abathengisi badalelwe ukuthi baphelelwe yisabelomali bese beqala ukusika amakhona uma lokhu kungenziwanga kahle.
Asikho isikhathi esanele se- Ukuqinisekisa ikhwalithi. Kusobala ukuthi lokhu kube kokwehla okukhulu ekwethulweni kweHealthCare.Gov. Bebesebenza ngosuku olunzima lokwethulwa (isikhathi ukuguquguquka okungaguquguquki konxantathu kuleli cala) futhi izici nesabelomali bekufanele ziguqulwe ukuhlangabezana nosuku lokuqalisa nesikhathi seQinisekiso leKhwalithi elifanele elakhelwe kuhlelo. Leli iphutha elibi kakhulu futhi mhlawumbe libiza abantu abaningi imisebenzi yabo.
Tags: izindlekoukwehlulekaiziciumugqa wokuqedaezempilo.govimininingwane yokwakhaukuqinisekisa ikhwalithiumugqa wokuqalaisikhathiunxantathuAbathengisi
Umbiko weSoDA ka-2013 - Umqulu 2
Abathengisi be-B2B Bathola Impumelelo Ngokumaketha Okuqukethwe